स्वरोजगार लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा फागुन २९ मा, बुक क्लोज कहिले ? Bizshala -
स्वरोजगार लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा फागुन २९ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो १२ औँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ।
संस्थाको हिजो शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही फागुन २९ गते शनिबार आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सभा काठमाण्डौको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिहान ११ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ।
सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल १३.०४ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा १२.३९ प्रतिशतले हुन आउने बोनस सेयर र ०.६५ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) रहेका छन्।
सोही सभाले अन्य उपयुक्त वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ति प्रयोजनका आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्ने पूर्ण अख्तियार सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ।
लाभांश र सभा प्रयोजनका लागि संस्थाले यही फागुन १५ गतेदेखि फागुन २८ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ फागुन १४ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्र यो संस्था प्रस्ताव गरेको लाभांश पाउन र आयोजना गर्न लागेको वार्षिक साधारणसभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्।
Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha AGM
समता घरेलु लघुवित्तको सेयर रजिस्ट्रारमा आरबीबी मर्चेन्ट
काठमाण्डौ । समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर...
स्पर्सलाई प्राप्ति गरेको ग्लोबल आईएमई लघुवित्तले यही वैशाख ८
काठमाण्डौ । स्पर्स लघुवित्तलाई प्राप्ति गरेपछि ग्लोबल आईएमई...
तेस्रो त्रैमासमा फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफा १२.९४%ले
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा फर्स्ट �...
आपसमा गाभिएपछि समता र घरेलु लघुवित्तको एकीकृत कारोबार आजबाट
काठमाण्डौ । आपसमा मर्जरपछि समता र घरेलु लघुवित्तको एकीकृत कारोबार...
महुली लघुवित्तको एजीएम आज, २१.०५% लाभांश र एफपीओ जारी मुख्य
काठमाण्डौ । लाभांश र एफपीओ जारी मुख्य अजेन्डासहित महुली लघुवित्त...
मर्जरपछि समता र घरेलु लघुवित्तको एकीकृत कारोबार वैशाख २ बाट
काठमाण्डौ । मर्जरपछि समता र घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था...
रिलायन्स फाइनान्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज
काठमाण्डौ । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले आफ्नो ११ औँ वार्षिक...
शालिग्राम र सीवाईसी नेपाल लघुवित्तबीच मर्जर सम्झौता, राष्ट्र
काठमाण्डौ । आरम्भ लघुवित्तसँग मर्जर सम्झौता तोडिएपछि शालिग्राम...